Ụbọchị My Pet » 5 Ụzọ Chọta Ịhụnanya nke Ndụ Gị!
emelitere ikpeazụ: Sep. 16 2020 | 2 min agụ
Anyị niile bụ mgbe niile, ma subconsciously ma ọ bụ consciously, na-ele anya n'ihi na onye. Nke ahụ onye ahụ anyị nwere ike ịkekọrịta ndụ anyị na na na-na-ga-akwụsị anyị na-adịgide adịgide akara aka nke ndụ na a ewepụghị na N'ụbọchị nke abụọ pusi. Ebe a na-dị nnọọ ụzọ ise iji zere na akara aka na-enwe ọtụtụ ichekwa cat nri iji kwụọ ụgwọ maka!
Ndi A Night Klas
Common mmasị bụ isi ebe a. Ma ọ bụ foto ma ọ bụ ihe na-ede, -ahọrọ mgbe nile a n'abalị klas nke incorporates gị ọdịmma. Ịghọta bụ nnukwu ihe mgbe ọ na-abịa na-achọta a soulmate. Ị ga-esi onye ọ bụla ọzọ nke bụ ya mere ọtụtụ jụụ ụdị adaba kwupụta onye ọ bụla ọzọ na ọtụtụ jụụ eccentrics adaba kwupụta onye ọ bụla ọzọ. Ya mere ọ bụrụ na ị họrọ a n'abalị klas nke gị onwe gị nwere mmasị na ya na-enwekwu ndị likelihood na ị ga-ezute ndị dị nnọọ ka onwe gị.
Ogwe / klọb
Ke ofụri ofụri ndị mmadụ anaghị gbagoo ọ bụla ọzọ na Ogwe na klọb dị ukwuu ugbu a n'ihi na ha na-atụ egwu ndị mmadụ nwere ike iche na ha na-creeps ma ọ bụ ihe. Ma ha ka bụ ebe ịhụnanya nwere ike agbawa. Dị ka ihe ọṅụṅụ na-aga ndị mmadụ anaghị agbasaghị na-echegbu onwe ọkara dị ukwuu ihe ndị mmadụ na-eche banyere ha ma ọ bụ na-echegbu onwe dị ukwuu banyere ihe na-ekwu otú ahụ, na uche ha ka bụ ndị oké ebe izute ndị na. O doro anya na m ga-nye ndụmọdụ-aga n'ụlọ ha na n'abalị ma were ha ọnụ ọgụgụ. Ọ pụrụ ịbụ mmalite nke ihe.
Ọrụ bụ ebe ọtụtụ ndị na-achọta ịhụnanya nke ndụ ha dị ka na-agwụ ike dị ka na-ada. Ya mere na-agbalị ịbụ na a ọrụ ị hụrụ n'anya ma ọ bụrụ na i nwere ike na e nwere ihe a nnukwu ohere ị ga-pịa na onye ị na-amasị. Ma ọ bụrụ na ị na-eme ihere ha gburugburu, echegbula. Ọ bụrụ na ọ pụtara na ka eme, ọ ga-eme. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, e nwere ọtụtụ ihe azụ n'ime oké osimiri ahụ dị ka ha na-ekwu.
The gigging circuit bụ kediegwu izute ndị mmadụ. Ọ dị ka mmanya circuit naanị na ị pụrụ ịkwụsị ice sị ihe dị ka, “M hụrụ n'anya na riff ị na-egwuri.” Ọ bụ nnọọ ụzọ dị mfe iji izute onye na nza nke enyi n'ụzọ kwa otú ịmụta a ngwá egwú, ma ọ bụrụ na ị dịghị ama egwu otu, na-esi n'ebe ahụ ma na-eme ụfọdụ gigs.
Anaghị apụta chọsiri
M depụtara ụzọ anọ nke izute onye ma nke ikpeazụ bụ ịbụ ihe kasị mkpa. Ị ga-n'aka na ị na-adịghị abịa gafee ka ndụ gị kwụnyeere ịchọta onye ga-wuchaa ya. Gbaa mbọ hụ na ị na-ọtụtụ na-aga ná ndụ gị na-ezute mmadụ bụ nanị otu akụkụ nke gị ozi, bụghị dum ozi. Na ndị ọzọ okwu ị na-egosi na ị dị ike zuru ezu na-ebi ndụ N'ụbọchị nke abụọ na ewepụghị ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụghị otú ị karịsịa n'echiche ọdịnihu gị. Ò obi ike na gị onwe gị akpụkpọ. E nwere ihe ọ bụla ọzọ mara mma.